December 2021 – ရွှေစကား
ပြိုင်ပွဲစုံ ၈ပွဲအထိရှုံးပွဲမကြုံဖူးသေးတဲ့ မန်ယူအသင်းက ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် အဆင့် ၄ လောက်နဲ့ကျေနပ်စရာလားလို့ ရန်းနစ်ပေါက်ကွဲ
ယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ ရန်းနစ်က အသင်းအနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရေးထက် ပိုနိုင်တဲ့အလားအလာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ယမန်နေ့ညက ဘန်လေကို ၃-၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အဆင့် ၆ နေရာ ပြန်ရောက်လာပြီး အဆင့် ၄နေရာက အာဆင်နယ်နဲ့ ၄မှတ်အကွာ ၁ပွဲလျော့ အနေအထား ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရန်းနစ်ကတော့ သူ့အသင်းအနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ထက် ပိုမြင့်မားတဲ့ပစ်မှတ်တွေ ထားရှိသွားမယ်လို့ …
ဘိုင်လီကစားပုံက အန္တာရယ်များလွန်းတယ်လို့ ထောက်ပြပြီး ဘန်လေနဲ့ပွဲကသဘောကျမိတဲ့ ကစားသမားတွေကိုချီးကျူးခဲ့တဲ့ရန်းနစ်
ရန်းနစ်က” အဲရစ်ဘာယီအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်ပေးဂိုးမတိုင်ခင် ဘာယီဘက်က အမှား လုပ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်။ သူ့ကစားတဲ့ပုံစံတွေက အန္တရယ် အရမ်းများလွန်း​နေပါတယ်။ သူ့ဒဏ်ရာအခြေအနေ အတိအကျသိရအောင် ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ရပါမယ်။ သူက အာဖရီကဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေ မယ့် လင်ဒီလော့ဒ်မှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လို့ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့က ပြန်ခေါ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လား? အကယ်လို့ ဇန်နဝါရီလအပြောင်းအရွှေ့က ကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီဖြစ်တယ်ဆို အပြောင်းအရွှေ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဒီကိစ္စအပေါ် ကျွန်တော်တို့က …
သူ့ရဲ့ ဘဝမှာ ရင်ဆိုင်ရအခက်ဆုံးနဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး နောက်တန်းကစားသမားကို ပြောပြခဲ့တဲ့ နစ္စတယ်ရွိုင်း
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးရုဒ်ဗန်နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာ အီတလီဂန္ထဝင်ခံစစ်မှူးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပေါ်လိုမာလ်ဒီနီနှင့်အလက်ဇန္ဒရိုနက်စတာဦးဆောင်တဲ့၂၀၀၄-၀၅အေစီမီလန်ခံစစ်မှာ သူ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသမျှခံစစ်တွင် အခက်ခဲဆုံးခံစစ်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟပြောကြားလာပါတယ်။ ဒတ်ချ်တိုက်စစ်မှူးဟာယူနိုက်တက်တွင်ကစားစဉ်တုန်းကဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့လက်အောက်တွင် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၊အက်ဖ်အေဖလားနှင့်လိဂ်ဖလားတို့ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာယူနိုက်တက်အတွက်၂၁၉ပွဲကစားရာတွင်ဂိုး၁၅၀အထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့ကာပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူးတွေထဲကတစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အသက်၄၅နှစ်ရှိနစ္စတယ်ရွိုင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်မှာအေစီမီလန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတော့ မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒို၊နစ္စတယ်ရွိုင်း၊ရိုင်ယန်ဂစ်၊ဝိန်းရွန်းနီတို့ပါဝင်တဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ ဆန်စီရိုသို့သွားရောက်ရင်ဆိုင်ချိန်မှာတော့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုစဉ်က အေစီမီလန်ခံစစ်တွင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူများဖြစ်ကြတဲ့ကာဖူး၊ဂျပ်စတမ်း၊နက်စတာ၊မာလ်ဒီနီတို့ကစားနေပါတယ်။ မီလန်ခံစစ်ကြောင်းရှေ့တွင်ဂတ်တူဆိုရှိနေပါတယ်။နစ္စတယ်ရွိုင်းက သူသာဘောလုံးရရင် သူတို့ကသတ်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့ကြောင်းဆိုသွားပါတယ်။ နစ္စတယ်ရွိုင်းက “အီတလီခံစစ်တွေကရင်ဆိုင်ကစားရတာဆိုးရွားလွန်းလှတယ်။ သူတို့ကအမြဲနောက်မှာဘဲနေတယ်။ရှေ့သို့နည်းနည်းပဲတက်တယ်။သူတို့ကဂိုးလုံးဝမပေးရအောင်ကစားတယ်။ ကာဖူး၊စတမ်း၊အလက်ဇန္ဒရိုနက်စတာ၊ပေါလ်လိုမာလ်ဒီနီတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နောက်တန်းဆို ဘာကောင်းသလားမမေးနဲ့။သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာဂတ်တူဆိုကလည်းရှိသေးတယ်။ကျုပ်ဘောလုံးရရင် ဘဲလာသတ်တော့မယ့်အတိုင်းပဲ။ပြီးတော့ပီယာလိုနဲ့ဆီးဒေါ့ဖ်တို့လည်းရှိတယ်။ တကယ့်အတောင့်တင်းဆုံးအသင်းပါ။တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့ညပါပဲ။ကန်ခွင့်ကလေးတစ်ကြိမ်ရလုနီးပါးတောင်မဖြစ်ခဲ့ဘူး”လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။ အေစီမီလန်ဟာယူနိုက်တက်ကို ချန်ပီယံလိဂ်၁၆သင်းတွင်နှစ်ကျော့စလုံးအနိုင်ယူပြီးပြိုင်ပွဲမှထွက်ခွာစေခဲ့ပါတယ်။ …
ဘန်လေနဲ့ ပွဲမှာ ပြခဲ့တဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်ကို မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်တင်ဖို့ အွန်နရီအကြုံပြု
ဒီမနက်အစောပိုင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၃-၁ ဘန်လေ ပွဲအပြီးမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူး သီယာရီ အွန်နရီအနေနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ အတော်လေးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ စကော့ မက်တော်မနေးကို ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ရာ့ဖ် ရန်းနစ်ရဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဘန်လေနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ်တန်းဆင်းဇုန်ထဲက အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ နယူးကာဆဲလ်ယူနိုက်တက်အသင်းကို တစ်ဖက် ၁ ဂိုးစီ သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပြီး …
မနေ့ညကခြေစွမ်းတွေကြောင့် ဂျူဗင်တပ်ရဲ့ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးပီယာလိုနဲ့ နှိင်းယှဥ်ခံနေရတဲ့ မန်ယူကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်
စကော့ မက်တော်မီနေးဟာ ကြာသပတေးနေ့ညက ဘန်လေအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ် ပထမပိုင်း ကွင်းလယ်မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ခြေစွမ်းပြသခဲ့ပြီးနောက် ပရိသတ်တွေက ပီယာလိုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ် ပထမပိုင်း ၁၀ မိနစ်မှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးသတ်နဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးကို ကန်သွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုက ပင်နယ်တီ ဧရိယာထိပ်နားမှာ ထိုးပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို …
ဘန်လေကို ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေခြေစွမ်းတောက်ပပြီး ဘယ်သူတွေညံ့နေတုန်းလဲ Ratingများ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီနေ့နံနက်မှာတော့ 2021 ရဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် အဖြစ် အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းထဲမှာ ဘန်လေ အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး 3-1 ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ ရန်းဂနစ် လက်အောက်မှာ ယူနိုက်တက်တို့ ပထမဆုံး အကြိမ် 1 ဂိုးနဲ့ …
မနေ့ညကပွဲမှာ ပေါလ်စကိုးဝင်ပူးတဲ့ ခြေစွမ်းတွေရအောင် နည်းပြရန်းနစ်ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာ ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ တော်မီနေး
မန်ယူအသင်းဟာ မနေ့ညက ဘန်လေအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံကစားခဲ့ပြီး ၃-၁ ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ချီးကျူးရမယ့် ကစားသမားကတော့ တော်မီနေးဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ ဧရိယာပြင်ပ အပြင်းကန်ချက်တွေက အသက်ရှုမှားလောက်အောင်ကို ကောင်းနေကပြီး ပေါလ်စခိုးဝင်ပူးသလားတောင် အောက်မေ့ရပါတယ်။ တစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့သလို ရော်နယ်ဒိုရဲ့သွင်းဂိုးဟာလည်း သူကန်တဲ့ဘောလုံးကို ဂိုးသမားကာကွယ်ရာမှ တိုင်ထိပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အလုံးဖြစ်ပါတယ်။ တော်မီနေးက ” မနက်ဖြန်(ဒီနေ့) မှာကျရောက်မယ့် ဖာဂူဆန်မွေးနေ့လား? ဂန္တဝင်နည်းပြတစ်ဦးဗျ။ …
တိုက်စစ်အားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပထမပိုင်းတင် ၃ ဂိုးသွင်းပြီး တိတ်ဆိတ်စေခဲ့တဲ့ မန်ယူ (ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်)
မန်ယူအသင်းဟာ မနေ့ညက ဘန်လေအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံကစားခဲ့ပြီး ၃-၁ ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ နယူးကာဆယ်ကို သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲက လူစာရင်းကို ၆နေရာလောက်ထိအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်တန်းကို ၃ယောက်ထိပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဗာရိန်းနေရာမှာ ဘိုင်လေ၊တဲလက်စ်နေရာမှာ လုခ်ရှော၊ ဒါးလော့နေရာမှာ ဘစ်ဆာကာတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ကွင်းလယ်မှာလည်း ဖရက်ဒ်နေရာမှာ တော်မီနေး ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကျနေတဲ့ ဖာနန်ဒတ်နေရာမှာ ဆန်ချိုကို ထည့်ပြီး ဂရင်းဝုဒ်ကို ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ဆင်းကစားခိုင်းကာ တိုက်စစ်မှာ …
ဘန်လေအသင်းကို ဂိုးပြတ်သွင်းပြီး 2021ကို အနိုင်ရလဒ်နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်
ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ အို့ထရတ်ဖို့ဒ်ကွင်းကြီးမှာ ဘန်လေအသင်းကို 3ဂိုး 1ဂိုးဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြကြီး ရန်းနစ်ခ်ကတော့ လူစာရင်းမှာ အပြောင်းအလဲ အများအပြား ပြုလုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူအသုံးပြုနေကြ ဒါလော့၊ တဲလက်စ်တို့ကို အနားပေးကာ ၀မ်ဘစ်ဆာကာ၊ လုခ်ရှောတို့လို ကစားသမားတွေကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ အမှားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ ဗာရန်းအစာ နိုင်ငံအသင်းကနေ တကူးတကခေါ်ထားတဲ့ ဘိုင်ယီကို …
မန်ယူအသင်းမှာ တစ်ယောက်ကောင်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့် အသင်းတစ်သင်းလိုတော့ မကစားတတ်ကြဘူးလို့ အလန်ရှီးယားဝေဖန်
အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဖြစ်သူ အလန်ရှီးယား က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှ ကစားသမားတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ဝေဖန်လိုက်ပြီး သူတို့တွေ ကိုယ်တိုင်က မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ် ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ အင်္ဂါနေ့ နံနက်ခင်းတုန်းကတော့ စိန့် ဂျိမ်းစ် ပါ့ခ် ကွင်းထဲမှာ နယူးကာဆယ် အသင်းနဲ့ …